Ciidamada nabad ilaalinta itoobiyaanka oo si rasmi ah ula wareegay amaanka Abyeey
Khartoum:-Wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka Sudan Colonel Suwaarmi Khaalid Sacad ayaa sheegtay in ciidanka qalabka sida ee Sudan ay ka baxayaan Abyeey marka ay soo dhameystirmaan ciidamada nabad ilaalinta itoobiyaanka deegaankaas, sidoo kalana xukuumadda koonfurta Sudan ay ciidamadeeda kala bixi doonto Abyeey.
Golaha amaanka ayaa 27 bishii June ee la soo dhaafay u codeeyey in ciidamo caalami ah oo ka kooban 4200 oo askari loo diro deegaanka lagu muransan yahay ee Abyeey ee u dhexeeya woqooyiga iyo koonfurta Sudan.
Golaha Amaanka ayaa tilmaamay in howsha ciidamada Nabad Ilaalinta ee ka socda dowladda Ethiopia ay noqon doonto la socoshada ka bixitaanka ciidamada woqooyiga iyo koonfurta Sudan ee ku sugan Abyeey iyo gaarsiinta kaalmooyinka bani’aadamnimo deegaankan ku yaala xadka u dhexeeya woqooyiga iyo koonfurta Sudan.
Ciidanka woqoyiga ayaa galay Abyeey 21 May ee la soo dhaafay taasi oo keentay in ay halkaasi ka qaxaan inkabadan 100 Kun oo qof sida ay QM ku qiyaastay.
Labada dhinac ayaa 20 bishii June ee la soo dhaafay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kukala saxiixday heshiis dhigaya in Abyeey ay noqoto meel ka caagan hubka.
Golaha amaanka ayaa carabaabay walwalka uu ka qabo xaaladda hadda kajirta deegaanka Abyeey gaar haan dambiyada ka dhanka ah dadka rayidka iyo xadgudbka qaanuunka caalamiga ee ku aadan xuquuqda aadanaha.
Mucaaradka Libya oo sheegay in ay qafaasheen sarkaal sare oo katirsan ciidamada Qadaafi
Tripoli:-Mucaaradka Libya ayaa shaaca ka qaaday in ay gacanta ku dhigeen Jenraal Cabdi Nabiih Zayid meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Saliidan oo ay ka dhaceen dagaalo ba’an waqtiyadii ugu dambeeyey.
Jeneraal Zayid aya ahaa sida la sheegay isku dabaridaha howlgalada iyo qaabeeyaha guutooyinka taangiyada deegaanka Masraata, taasi oo keentay dhimashada boqolaal qof.
Dhanka kale waxaa soconaya weerarada ciidanka mucaaradka ay ku hayaan magaalada Bareega ee shidaalka qaniga ku ah, xilli televison-ka qaranka Libya uu baahinayo baaqyo ka soo yeeraya kooxaha mutadawiciinta ee doonaya in ay soo haleelaan ayna ka barbar dagaalamaan ciidanka xukuumadda Libya.
Mucaaradka ayaa sheegay in ay qabsadeen goobo badan oo magaalada kamid ah islamarkaana ay sugayaan amar ku aadan sidii markale ay u weerarilahaayeen buuraha nufuusa ee koonfurta galbeed dalka Libya.
Lubnaan oo ogolaatay in muwaadiniinta khaliijiyiinta ay ku soo galaan dalkeeda Viso la’aan
Beirut:- Xukuumadda Lubnaan ayaa sheegtay in muwaadiniinta dowladaha golaha iskaashiga khaliijka in ay heli karaan dal kugal marka ay soo gaaraan Beirut international airport.
Wasiirka dalxiiska lubnaan ninka lagu magcaabo Faadi Cabuud ayaa sheegay in talaabadani ay ku timid dadaal xukuumadda ay ku dhiirigelinayso dalxiiska kadib markii ay dhibaato dhaqaale ka soo gaartay rabshadaha ka socda dalka Syria ee ay deriska yihiin.
Wasiirka oo shir jaraa’id qabtay kadib kulan ay yeesheen ra’iisal wasaare Najiib Miiqaati ayaa sheegay in dalkiisa uu khasaaray %65 dalxiiskii uga iman jiray dhanka dhulka sababo la xiriira xaaladaha dalka Syria.
Wasiirka ayaa sheegay in uu kala hadlay Mr Miiqaati mowduuca Visa-ha iyo qaabkii loogu fududeen lahaa dhamaan dadka ka imanaya dowladaha khaaliijka xitta haddii aysan u dhalan dowladaha golaha iskaashiga gacanka.